Dhaqanka Rooma | Wararka Safarka
Mariela Carril | 14/09/2021 17:00 | dhaqanka, Roma
Roma waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu cajiibka badan Yurub. Waan jeclahay magaaladan, ma noqon karto mid ka sii qurux badan, ka dhaqan badan, ka xiiso badan ... Suurtogal maaha in la caajiso, aan macquul ahayn in waqti xun la yeesho, aan macquul ahayn in aan la yaabin talaabo kasta.
Rome waa mid fantastik ah maantana waxaan ka hadli doonaa Dhaqanka Rooma, si aad wax u ogaato ka hor safarka.
2 Dhaqanka Rooma
Magaaladu waa caasimadda gobolka Lazio iyo Talyaaniga waana magaalada saddexaad ee ugu dadka badan Midowga Yurub. Waa magaalo leh taariikhdeeda saddex kun oo sano waxayna ahayd magaalada ugu weyn ee aadanaha, marka lagu daro qalbiga mid ka mid ah ilbaxnimooyinkii hore ee ugu muhiimsanaa uguna saamaynta badnaa.
Taariikhdu waxay ka soo baxdaa dariiq kasta, barxad kasta, dhisme kasta. Waa magaalada ugu qaalisan dhismayaasha iyo taariikhaha taariikhiga ah ee adduunka ilaa 1980 waxay ku jirtay liiska Dhaxalka Aduunka ee UNESCO.
Waxaan u malaynayaa in ka hor intaadan booqan waddan ama magaalo qofku waa inuu wax akhriyaa, samee xoogaa cilmi baaris ah, oo qoraa macluumaadka ku saabsan meesha loo socdo. Markaa, waxaan dhisi karnaa qaab -turjumaad ah waxa aan arki doonno ama la kulmi doonno. Taasi ma tirtirto layaabka, ama xiisaha, ama farxadda. Taa bedelkeeda, waxay ka dhigaysaa mid aad u weyn, maxaa yeelay ma jiraan wax ka qurux badan sidii aan ku arki lahayn qofka koowaad waxa aan ku ogaanno oo keliya buugaagta ama shabakadaha bulshada.
Casriga Rooma waa a magaalada eclectic, isku darka cajiibka ah ee dhaqanka iyo kan casriga ah. Heer bulsho, noloshu waxay ku wareegsan tahay qoyska iyo saaxiibbada taasina waxaa lagu arkaa dadka iyo nolol maalmeedkaba. In kasta oo ay tahay caasimad, haddana waxaa jira hawo gaar ah oo magaalo weyn oo hadhsan, gaar ahaan xaafadaha iyo suuqyadooda iyo in kasta oo ay si joogto ah u yimaadaan oo u socdaan dalxiisayaashu.
Rooma iyo cuntadu waa is garab socdaan. Wax cusub ma aha. Gastronomy -ka Roomaanku waa mid fudud, laakiin hodan ah oo leh dhadhan badan. Nolosha bulshadu waxay ku wareegsan tahay cuntada, shirarka, wax iibsiga, casho ka dib. Roomaaniyiintu caadi ahaan wax bay wada cunaan, qoyskooda iyo asxaabtooda, wakhtigaas oo miiska hareerahana waa mid qiimo leh. Oo haddii aad rabto inaad aragto qaar ka mid ah, waxaa fiican inaad ka baxsato maqaayadaha dalxiiska ama meelaha runtii caanka ah.
Si aad u hesho cunto Roomaan ah oo tayo leh oo dhab ah, waa inaad ka baxdaa waddada la garaacay. Meelaha ugu fiican ee wax lagu cuno waxna laga cabbo sida deegaanka ayaa badanaa ah kuwa aan lahayn dalxiisayaal. Halkan waxaa ah meelo lagu taliyay: quraacda waxaad isku dayi kartaa Caffé Sab't Eustachio, oo u dhow Piazza Navona, oo shaqeyneysa ilaa 30kii. Qadada, La Taverna dei Fori Imperiali, makhaayad qoys oo aan ka fogeyn Colosseum, oo ku taal Via della Madonna dei Monti, 9.
Haddii aad rabto inaad wax ka iibsato oo aad wax ku cunto afar gees ama lug, markaa waxaad ka iibsan kartaa Fa-bio, oo u dhow Vatican, Vía Germanico, 43. Casho, La Carbonara, makhaayad Talyaani dhaqameed ku taal Monti, Vía Panispema, 214. Haddii ay tahay pizza, Gusto, Piazza Augusto Imperatore, 9. Jalaato wanaagsan, Ciampini, oo u dhaxaysa Piazza Navonna iyo Tallaabooyinka Isbaanishka.
Iyada oo tixgelin la siinayo xafladaha iyo xafladaha RomeRuntu waxay tahay inay jiraan caadooyin aad muhiim ugu ah Roomaanka. Tusaale ahaan, waxaa jira Carnivall, oo sidoo kale laga xuso dalka intiisa kale. Carnival ee Rome soconayaa sideed maalmood waxaadna arki doontaa fannaaniin, bandhig masraxyo, riwaayado kala duwan oo waddada ah. Waa wakhti fiican in lagu socdo waddooyinka oo lagu raaxeysto jawi farxad leh.
Kirismaska ​​iyo Ciidda Masiixiga ayaa ah ciidaha Masiixiyiinta ee ugu muhiimsan magaalada, marka lagu daro inay calaamad u yihiin bilowga ciidaha. Intaa waxaa dheer, suxuunno khaas ah ayaa loo kariyaa labadan xisbi sida panettone iyo panforte ee Kirismaska ​​ama sausage Cotechino, Easter the Minestra di Pasquea, wan Angelo, roodhida Gubana Easter ... Wax kasta oo ku yaal bartamaha Via Crucis, kaas oo ka socda Colosseum ilaa Madasha Roomaanka Jimce Wanaagsan, ducadii Pope -ka ee Fagaaraha St. Peter iyo Masjidka Kirismaska ​​habeenkii kaniisadaha lagu sharraxay qabaal ...
Ka sokow ciidaha Masiixiga Rome waxay ku nooshahay ciidaha qaranka, kuwaas oo halkan Talyaanigu dhowr ku yihiin. Magaalo waliba waxay u xustaa quduuskeedas iyo marka laga hadlayo Rome waa Saint Peter iyo Saint Paul. Xisbigu wuu ku dhacaa 29 bisha Juun waxaana jira kaniisado badan iyo xitaa rashyo ka yimid Castel San't Angelo.
Cuntada, xafladaha, dadka ... laakiin sidoo kale waa run in cutub kale uu ka kooban yahay dhaxal taariikheed iyo mid dhismeedba Baaqa Magaalada Daa'imka ah. Marwalba waan lugayn jiray Rome, runtu waxay tahay in dhawr jeer oo kaliya aan qaatay gaadiidka dadweynaha. Sababtoo ah ma aha mid aan habboonayn laakiin waa haddii cimiladu wanaagsan tahay oo aad haysato kabo raaxo leh, ma jirto hab lagu lumiyo waddooyinkeeda. Waxaad samaysaa daahfur kasta!
Waa ama haa, qadiimiyadu ma kari karaan mana aha inay ka maqnaadaan: booqo Pantheonoo uu dhisay Hadrian 118 BC Capitoline Hill oo ka fiirso Madasha, ku fadhiiso jaranjarooyinka Talaabooyinka Isbaanishka oo arag Fontana della Barcaccia ama aqalka abwaanka Jhon Keats, baaskiil raac ama ku soco Waxaa mara Anticca, socod galabtii Piazza Navona, gacantaada geli Bocca della Verita, booqo Coliseum, haddii ay suurtogal tahay qorrax -dhaca, booqo Suuqa Campo de Fiori, gal Vatican -ka, tag matxafyada, ka Capuchin Crypt, sahaminta Ghetto Yuhuudda gudaha Trastevere, ku tuur lacagta birta ah Fountain di Trevi.
Xusuusnow in Rome ay leedahay 3 kun oo sano oo taariikh ah, laga soo bilaabo Qadiimiga, ilaa sanadihii ugu horreeyay ee Masiixiyadda, qarniyadii dhexe, Renaissance ama cutubka baroque ee magaalada ilaa waqtiyada casriga ah. Dhisme kasta, labajibbaaran kasta, il kasta, waxay leedahay taariikhdeeda waxayna siisaa run ahaantii u gaar ah dhaqanka Roomaanka.
Dabcan, safar kaliya kuma filna. Waa inaad ku noqotaa Rome dhowr jeer, waqtiyo kala duwan oo sanadka ah. Waxaad had iyo jeer ogaan doontaa wax cusub ama aad ku jeclaan doontaa wax aad hore u taqaannay. Isku -darka dareenka ee u dhexeeya ogaanshaha iyo garashada ayaa ugu fiican.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka » Roma » Dhaqanka Rooma
Saxaraha ugu quruxda badan Afrika